Khulisa iTraffic - Amasu Afakazelwe angama-25 Okukhula
Khulisa iTraffic ngalezi Zindlela Eziqinisekisiwe ezingama-25
NgoLwesine, Septhemba 15, 2011 NgeSonto, uDisemba 4, i-2011 Douglas Karr
Khulisa ithrafikhi… yigama engilizwa kaninginingi. Akukhona ukuthi angikholelwa ekwandeni kwethrafikhi, kungenxa yokuthi ezikhathini eziningi abathengisi bazama kanzima ukukhulisa ithrafikhi baze bakhohlwe ukuzama ukukhulisa ukugcinwa noma ukuguqulwa kuthrafikhi asebenayo vele. Nawa amasu aphezulu angama-25 esiwafakile esisebenzisela izakhiwo zethu zewebhu namakhasimende ethu ukukhulisa ithrafikhi… nokuqinisekisa ukuthi bathola imiphumela ngayo!
Izindlela Zokwengeza Ithrafikhi:
Lungiselela isiza sakho se- izinjini. Ngaphandle kokungabaza, le yindlela elula yokwandisa ithrafikhi… futhi ngaphezu kwakho konke, kungumgwaqo ofanele okufunayo! Qonda amagama angukhiye okudingeka uwasebenzise lawo basebenzisi benjini yokusesha.
Sebenzisa izihloko zezindaba ezithatha ukunaka. Ubuwazi ukuthi abantu bachofoza kuphela ku-20% wezihloko ezisematheni abazifundile? (Angizange ngize ngifunde eyakwaVince Robisch iposi). Ungakhuphula ithrafikhi kakhulu ngokugxila ekunakekeleni isihloko sakho njengokuqukethwe.
Sebenzisa okucindezelayo izincazelo zemeta emakhasini akho nakubhulogi okuthunyelwe. Izincazelo ze-meta zingaba semngceleni wokuthola amazinga aphezulu wokuchofoza kumakhasi womphumela wokusesha, lokhu kube isu eliyisihluthulelo lokukhulisa ithrafikhi namakhasimende ethu.
Hlola wakho sipelingi neluhlelo lwelulwimi. Abanye abantu baphakama kakhulu mayelana nesipelingi nohlelo lolimi, beshiya isayithi ngokushesha lapho bebona iphutha. Ngisanda kuthola UkuhlolaDog lapho othile ebika iphutha lesipelingi kimi kepha bengingazi ukuthi yiliphi ikhasi.
Qala ibhulogi futhi kaningi nangokungaguquguquki. Lapho ubhala ngokwengeziwe, kuba nethuba elikhulu lokuthi othile athole okuqukethwe kwakho. Lapho uvumelana ngokwengeziwe, abantu abaningi bazobuya ukuthola okuqukethwe okusha.
Faka imali ekwakhiweni izinsiza. Idizayini enhle izodonsa, idizayini embi izobuyisa amakhasimende. Kunamasayithi amaningi amahle laphaya anokuqukethwe okungakholeki okuvele kungadonseli ukunakwa ngoba kumbi impela. Imiklamo emikhulu akudingeki ukuthi ikubize izinkulungwane… kunenqwaba yezingosi ezinetayitela ezinokuhlelwa okumangazayo nobuhle obungaphansi kwama- $ 20!
Faka ubunikazi bakho noma abasebenzi bakho kusayithi lakho. Abantu abakuthandi ukufunda ukukhangisa, bafuna ukuzwa sengathi bafunda umlayezo ovela kumuntu wangempela. Abantu abaningi bazokhangwa kusayithi lakho noma kubhulogi futhi abantu abaningi bazobuyela kubhulogi yakho lapho bazi ukuthi ababhekani nombhali wokuqukethwe ongaziwa. Ngincoma kakhulu ukusebenzisa Amaphrofayli we-Google namathegi we-rel ukubeka izithombe emiphumeleni yakho yosesho, futhi!
Faka okwakho ikheli lendawo kanye inombolo yocingo kusayithi lakho. Futhi, umuntu ofihla ubunikazi bakhe uthathwa njengongathembekile. Yazisa abantu ukuthi bangakuthola kanjani… futhi ungamangala ngokujabulisayo lapho uvakashelwa lapho bethola! Futhi, ukufaka ikheli lendawo kusayithi lakho kungathuthukisa amathuba akho okutholakala kumiphumela yosesho lwasendaweni.
Hlanganisa a ukwakheka kweselula kusayithi lakho noma kubhulogi. Ama-Smartphone aqhume ukuthandwa. Lapho abasebenzisi be-smartphone bebona ukuthi udizayinele isayithi lakho idivayisi yabo, bazobuya. Khulisa ithrafikhi yeselula nethrafikhi yonke izokwanda nayo!
Thuthukisa ubukhona bakho bezokuxhumana. Lapho othile ekuthanda noma ekulandela, usanda kungeza isivakashi esingahle sibe khona kunethiwekhi yakho. Khulisa inethiwekhi yakho futhi uzokhulisa ivolumu yethrafikhi evela kwinethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu. Cela inethiwekhi yakho ukuthi ixhumane nawe ukuze ukwazi ukuyivuselela ngezikhathi ezithile ngokuqukethwe kwakho okuhambisanayo.
Faka iphephandaba! Izivakashi eziningi ngeke zikuthole abakudingayo… kepha uma isayithi noma ibhulogi kufanelekile, bazokulandela ezinkundleni zokuxhumana noma babhalisele nencwadi yakho yezindaba. Uma uxhuma ubuyela kusayithi lakho, incwadi yakho yezindaba izokwandisa ithrafikhi ngokushesha. Ukumaketha nge-imeyili unembuyiselo engakholeki ekutshalweni kwemali ... futhi nembuyiselo engcono kakhulu kumgwaqo!
Faka izixhumanisi kumasiginesha akho futhi uwafake kuwo wonke ama-imeyili aphumayo. Ngeke wazi ukuthi uzokwenzani ukuze unake omunye umuntu ... futhi kusobala, usuvele unobudlelwano nomuntu omthumelela i-imeyili.
Sebenzisa amamenyu wokuzulazula osebenzayo. Ukuzulazula okusebenzayo kwenza indawo yakho isebenziseke kalula futhi izogcina ithrafikhi ibuya. Ukubekwa okuvelele kwezinto zokuzulazula kuzokwazisa nezinjini zokusesha ukuthi ziyini izinto eziyinhloko kusayithi lakho.
Nikeza amathuluzi asebenzisanayo njengokubala, Ukuhlola, nemiboniso. Abantu abafundi kakhulu njengoba ucabanga… abaningi bamane bafuna ithuluzi elifanele lokuthola ulwazi abaludingayo. I-calculator enhle esizeni izogcina abantu bebuya kaninginingi.
Sebenzisa izithombe, amashadi kanye ne-infographics. Izithombe namashadi akusizi nje kuphela abantu ukuthi baqonde futhi bakhumbule imininingwane, amasu afana ne-infographics enza kube lula ukwaba leyo mininingwane futhi bayidlulise. Futhi, amasayithi amaningi ezenhlalo afaka ukubukwa kuqala kwezithombe njenge-Facebook.
Thuthukisa abanye abaholi bemboni namabhulogi abo. Ukusho ontanga yakho kuyindlela enhle yokubamba ukunaka kwabo. Uma okuqukethwe kwakho kufanelekile, bazokwabelana ngakho nezithameli zabo. Iningi lalabo baholi linezethameli ezinkulu ngokumangazayo. Imvamisa, lapho osebenza nami engikhuluma, ngiphoqeleka ukuba ngiphawule bobabili kusayithi labo bese ngabelana ngesixhumanisi nomphakathi wami nezilaleli zami. Uma okuqukethwe kungakholeki, mhlawumbe ngingahle ngibelane ngokuthunyelwe ngakho. Lokho kuzokhiqiza izixhumanisi ezisuka kusayithi lami ziye kwezabo, umthelela omusha wethrafikhi ozohamba kuwo.
Faka izinkinobho zomphakathi futhi amathuluzi amabhukhimakhi womphakathi like Twitter, I-Facebook, i-LinkedIn, i-Google ne-StumbleUpon ukunika amandla izwi lomlomo. Lokhu kuvumela izithameli zakho ukuthi zikukhuthaze… mahhala .. kuzithameli zazo! Kusho okuningi kakhulu lapho othile kunethiwekhi yakho ancoma okuqukethwe. Ukugxila ekwabelaneni komphakathi kukhiqize ukwanda okukhulu kakhulu kwezimoto indawo yethu eyake yabonwa.
Khokhela ukunyuswa. Uma ubeke umzamo kokuthunyelwe okuhle, kungani ungakhokhi ukukukhuthaza? Uma unezixhumanisi zokuxhumana nabantu esizeni sakho njengathi, ezinye izivakashi ziyoba namahloni lapho zibona ama-1 no-0 ezinkinobho zakho zenhlalo. Kunamanethiwekhi amahle kakhulu lapho abantu abangaphinda babhale kabusha, bathande futhi babeke +1 okuqukethwe kwakho okuncane noma okungenalutho.
Hlanganisa okuqukethwe okudala. Ukuthi okuqukethwe kwakho kudala, akusho ukuthi kuphelelwe yisikhathi. Gwema ukusebenzisa izinsuku ekwakhiweni kwe-URl nokuthumela kuma-athikili - ufuna ukuqiniseka ukuthi izithameli zakho zicabanga ukuthi uyasebenza futhi okuqukethwe kwakho kusasebenza. Kanye ngenyanga, hlola okuqukethwe okubalwa kahle usebenzisa ithuluzi elifana ne- Semrush uphinde uvuselele izihloko zamakhasi, okuqukethwe nedatha yemeta yamagama asemqoka asezingeni lawo.
Shayela inani elikhulu lomgwaqo nge imincintiswano, ukukhushulwa kanye nemivuzo like I-PunchTab. Lawa maqhinga awahlali ekhipha izivakashi ezifanele kakhulu, kepha ngoba akhiqiza i-buzz nokuphromotha, uzogcina ithrafikhi entsha.
Ungayithathi kancane i- amandla wemidiya yendabuko, ikakhulukazi uma ungasebenzi emkhakheni wezobuchwepheshe. Ukukhulunyelwa embonini nakumamagazini, izethulo zezohwebo, isibambiso sokuthengisa, amakhadi webhizinisi, ngisho nama-invoice… ukuhlinzeka abantu nge-URl kuwebhusayithi yenkampani yakho, kubhulogi, nakumawebhusayithi kuzokwandisa ithrafikhi. Ezimayelana Nomphakathi abantu banobudlelwano nezimboni futhi banesikhathi nethalente lokufaka indaba yakho… awunjalo. Eminye yemigwaqo yethu ehamba phambili kube ngezintatheli zendabuko ezinkampanini ezinkulu zabezindaba ezibhale ngathi noma zaxoxisana nathi.
Sabalalisa okuqukethwe kwakho ku- amaqembu embonini on LinkedIn nezithangami. Abanye abantu bagaxekile kumaqembu athile, kepha abanye bayasebenza kakhulu - futhi lapho abantu bebona ukuthi uyasiza futhi uyazi izinto zakho, ekugcineni bazobuyela kusayithi lakho. Bangase futhi bathole izingxoxo zakho ngokusesha.
Njengoba nje amaqembu embonini esiza ukukhulisa ithrafikhi, kanjalo nokusiza ukuphendula imibuzo efanelekile Umbuzo nempendulo amasayithi. Ezinye zazo zikuvumela ukuthi ubhekise isixhumanisi kuzimpendulo zakho. Izindawo ze-Q & A beziqhuma ngokuthandwa kodwa kubonakala ngathi zehle kancane. Kodwa-ke, kulapho abantu bafuna izimpendulo - futhi uma unesixhumanisi kokuqukethwe kwakho kumbuzo omuhle, bazokubuyisela kusayithi lakho.
Ukucinga nokuqapha komphakathi ngamagama asemqoka ashiwo ezingxoxweni isayithi lakho noma ibhulogi engasiza ngalo. Unazo yini izexwayiso ezihlelelwe amagama esincintisana nawo, amagama womkhiqizo, amagama angukhiye wemboni? Ukubuyekeza lokhu njalo kuzokuvezela izethameli ezinkulu zabavakashi abangaba khona. Izokwakha nenethiwekhi yakho negunya lakho lapho unikeza imininingwane ebalulekile.
Ukuxhumanisa ukuxhumanisa kuseyindlela ephumelela kakhulu yokwanda kwezimoto. Ngokuvumelana ne Injini Yokusesha, Izinhlobo ezinhlanu zama-athikili zibonakala zikhiqiza ama-backlink amaningi kanye nomsebenzi omningi we-virus. Ziyizindaba, Ngokuphambene, Ukuhlaselwa, Izinsiza kanye namahlaya. Lokhu okuthunyelwe kwebhulogi, njengesibonelo, okuthunyelwe kwemithombo.
Tags: ukwandisa traffic
Uhlelo lwe-WordPress Backup… Unayo Eyodwa?
Dec 3, 2011 ngo-9: 19 PM
Ngiyavuma impela. Angikwazi ukuma "ababhali bokuqukethwe abangaziwa". ^ - ^
Sep 24, 2013 ku-2: 16 AM
Uhlu olukhulu. Ukwengeza, ngisebenzisa nezithombe ezinhle emakhasini ami futhi ngizihlanganyela ku-Pinterest, ku-Facebook, ku-Instagram nakwisixhumanisi esiya kuwebhusayithi yami. Ukudala inguqulo yesethulo yokuqukethwe kwami ​​nokuwabelana ngawo ku-SlideShare.net, eScribd nakwamanye amasayithi okwabelana ngamafayela nakho kuyasiza ukukhulisa izithameli zami nomgwaqo wami.